Liiska Ciyaartooyo Iyo Tabobarayaal Magac Wayn Ku Lahaa Kubada Cagta Oo Inagaga Qarsoomay Horyaalka Wadanka China – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
1:04 am » Guuguulaha Maanta 12:41 am » Diyaarado Ka Soo Kacay Saldhigyada Djibouti Oo Duqaymo Ka Gaystay Deegaanada Gobalka Salal 12:40 am » Xildhibaan Baar Oo Cod Dheer Kaga Digtay Halista Sicir Bararku Ku Hayo Nolosha Dadka 12:35 am » Cali Khaliif Oo Furitaanka Distoorka Ku Tilmaamay Xudunta Wada Hadalada 12:34 am » Xog-waranka Hooyo Wiil Iyo Gabadh Ay Dhashay Ku Weyday Tahriibka Iyo Guurka Qaaliyoobay Oo Sabab U Ah Dhallinyarada Badda Isku Biimaysa Liiska Ciyaartooyo Iyo Tabobarayaal Magac Wayn Ku Lahaa Kubada Cagta Oo Inagaga Qarsoomay Horyaalka Wadanka China Published on Feb 09 2017 // Ciyaaro Sidaynu kawarqabno waxa saaxada kubadda cagta saamayn wayn ku yeeshay horyaalka wadanka China ee China Supper League kaasoo kooxaha ka dhisani iibsdeen macalimiin, ciyaartooyo iyo Garsoorayaal magac wayn ku lahaa kubadda cagta. Sababta ugu badan ee ay kusoo jiiteen ayaa ah maaliyad iyo adduun xad dhaafa oo ay siiinayaan ciyaartooyada iyo Tabobarayaasha. Haddaba akhriste qormadeenan oo ka koobnaan karta dhawr qaybood ayaanu ku eegi doonaa liiska ciyaartooyo iyo Tabobarayaal caan ah oo horyaalkan u wareegay kuwaas oo inagaga qarsoomay, maadaama oo indhaha caalamku imika uun usoo jeestay fiirsiga horyaalkan. Xidigahan ayaa waxa kamid ahaa sidan;
1# Fabio Cannavaro: Difaacii waynaa ee Talyaaniga u qaaday koobkii adduunka ee sannadii 2006’dii, waxa uu xidigani in muddo ahba ku qarsooamay kana ciyaaraa horyaalka wadanka China, isagoo u saftay Kooxaha Tianjin Quanjian iyo Guanzhou Evergrande.
2# Demba Ba: xidigan ayaa kamid ahaa ciyaartooyada ugu cadcad horyaalka wadanka England ee Premier League-ga, waxaanu u safan jiray kooxaha West Ham, Newcastle iyo Chelsea balse waxa uu hadda u ciyaaraa kooxda reer China ee Shanghai Shenhua.
3# Luiz Felipe Scolari: waa tabobarihii u qaaday xulka qaranka Brazil koobkii adduunka ee 2002-dii, waxaanu hadda kamid noqday tabobarayaasha horyaalka China, isagoo tabobare u ah Kooxda Guangzhou Evergrande.
4# Stephane MBIA: Xidigan ayaa ka ciyaaray horyaalada Ingiriiska iyo Spain isagoo waliba kooxda Sevilla laqaday koobka Europa League-ga, waxaanu hadda katirsan yahay kooxda Hebei China Fortune.
5# Papiss Cisse: Xidigii hore ee kooxda Newcastle sida wayn u tabtay ee Cisse ayaan dib loo arag sidii uu ugu biiray kooxda reer China ee Shandong Luneng.
6# Gervinho: waa ciyaartooygii hore ee kooxaha Arsenal iyo Roma, waxaanu dhalasho ahaan kasoo jeedaa dalka Ivory Cost waxaanu ku biiray kooxda Hebei China Fortune.
7# Remires: waa xidigii khadka dhexe uga safan jiray kooxda Chelsea kaasoo kamid ahaa halbawlayaasha kooxdaasi, waxaanu xidign reer Brazil ku biiray kooxda Jiangsu Suning sannadkii hore, waxaana sannadkan kadaba tagay saaxiibadii John Obi Mikel iyo Oscar.
8# Marcello Lippi: ruug cadaagii reer Talyaani, waa tabobarihii u qaaday Talyaaniga Koobkii adduunka ee 2006-kii, waxaanu sidoo kale soo layliyey kooxaha Juventus iyo Inter Milan. Waxa uu hadda tabobare u yahay kooxda Guangzhou Evergrande ee reer China.
9# Felix Magath: waa macalinkii hore ee kooxaha Bayern Munich, Wolfsburg iyo Fulham waxaanu in muddo ahba tabobare u ahaa kooxda Shandong Luneng ee kadhisan dalka China.
10# Obafemi Martins: xidigii waynaa ee reer Nayjeeriya una safan jiray kooxaha Inter Milan iyo Newcastle Martins, waxa uu in muddo ahba kamaqnaa shaashadaha iyadoo dadka badankoodu u tirinayeen inuu ka fadhiistay ciyaaraha balse waxa uu ka xamaashaa kooxda Shanghai Shenhua, isagoo kasoo wareegay wadanka Maraykanka.
11# Sven-Goran Eriksson: tabobarihii hore ee xulka qaranka England, ayaa isagu ku sugan kana shaqaysta wadank China, waxaanu Kamid yahay dadka caanka ah ee ka xamaasha Horyaalka China.
12# Ezequiel Lavezzi; waa xidigii waynaa ee reer Arjentiin, kaasoo kasoo ciyaaray kooxo dhawra oo ay kamid ahaayeen PSG iyo Napoli, balse ugu dambayntii waxa uu ku biiray sannadkii hore kooxda Hebei China Fortune ee Reer China.
13# Jackson Martinez: waa xidig in badn laga yaqaano yurub iyo dunnida kaleba, waxaana markii ugu dambaysay uu ka ciyaarayey horyaalka La-ligaha Spain, balse ugu dambeyntii waxa uu ku biiray kooxda Guangzhou Evergrande ee reer China.
14# Paulinho: waxa uu kamid yahay shakhsiyada aadka u magaca wayn ee horyalka China ku biiray kadib markii ay kooxaha wadankaasi kusoo jiiteen lacag badan.
15# Manuel Pellegrini: Waa tabobarihii hore ee kooxda Man City, waxaanu dalab deg-dega ka helay kooxda China ka dhisan ee China Fortune.
Ugu dambayntii akhriste waxaad ogaataa in liiskani ahayn mid dhamaystiran, waxaana jira xidigo intan ka badan oo magac-wayn ku lahaa kubadda cagta, kuwaas oo ka ciyaara horyaalka wadanka China.